I-Taghazout Surf Appartement - I-Airbnb
I-Taghazout Surf Appartement
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Med
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Med izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Taghazout surf apartement yindlu eyakhiwe yesimanje etholakala enhliziyweni ye-Taghazout, amamitha ambalwa ukuya esiteshini samaBhasi namatekisi, ukuhamba ngezinyawo okuyimizuzu eyi-5 ukuya emabhishi amangalisayo nendawo edumile yokuntweza e-Morocco.
Indlu yethu yama-surf yisitayela se-berber enezitezi ezintathu nophahla olukhulu olunokubukwa kolwandle okumangalisayo.
kunendawo evamile okwabelwana ngayo endaweni ophahleni oluphezulu lapho ungakhululeka khona ube neziphuzo ezimbalwa ezinye izivakashi futhi ubuke ukushona kwelanga okuhle nokubukwa kolwandle okumangalisayo.
idolobhana elihle laseBerber e-Taghazout, umbono ongavimbekile wolwandle, umchweli okahle, umthandi wokudoba, ukuzola nokuphumula kuqinisekisiwe. ukupaka eduze, izitolo eziningi, izindawo ezinhle zamabhishi kanye nezindawo ezihamba phambili zama-surf
Ngingasiza iklayenti lethu nganoma yini ngishayele inombolo noma u-whatsap